UNGAZICOCA NJANI IZIBANE ZENTLOKO NGENTLAMA YAMAZINYO - EKHAYA
Ungazicoca njani izibane zentloko ngentlama yamazinyo
Ukuba nemoto ecocekileyo kungaphezulu kokwenza nje into entle ebantwini. Izibane ezicocekileyo ziya kukunceda ugcine ukuqhuba okukhuselekileyo, kodwa kuhlala kubiza kakhulu okanye kudla ixesha ukufumana iikhemikhali eziyimfuneko zokwenza oku. Nangona kunjalo, ngobuchule bokwenza izinto, intlama yamazinyo inokucoca amazinyo ukuya ekucoceni izibane zentloko.
I-ebook yasimahla yethebhulethi ye-android
Sebenzisa i-rag kunye namanzi ukuhlamba emva koko, cofa izibane zakho zentloko ngentlama yamazinyo kwaye ubukele ukungcola kuphuma kanye. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuyenza ngendlela eyiyo ukuze ingagqibi ikhangeleka imbi kakhulu. Ukuba unezibane zangaphambili zeglasi, ungazami oku njengoko intlama yamazinyo ingarhabaxa ngokwaneleyo. Okokugqibela, ukuba uza kuyenza le nto, qiniseka ukuba uyenza ngohlobo olucothayo noluzinzileyo ukuthintela nakuphi na ukuchukumisa umphezulu emotweni. Landela la manyathelo kwaye uya kuba nezibane zangaphambili ezicocekileyo nezintsha kwangoko!
Coca izibane zentloko ngentlama yamazinyo [iyafundiseka]
uyenza njani i-infographic kwigama
Sebenzisa intlama yamazinyo ukucima izibane zemoto [Ingxoxo yeReddit]
ukuba wenzeni xa umhlobo wakho ebuhlungu
iindawo zokuya kumhla wokuqala
uluhlu lwamanqanaba abaphumeleleyo kwiikholeji
itshathi yesiqhelo yemihla ngemihla yabantu abadala
yonyusa njani imveliso yabasebenzi
indlela yokubuza intombazana enentloni ngaphandle
Usapho Imisebenzi Yosapho Umsebenzi Wohlahlo Lwabiwo-Mali Ukukhula Komntwana Ubomi Obunokubakho